Apple ရဲ့ 5G iPhone အသဈနဲ့ပတျသကျသညျ့ ကောလာဟလထှကျရှိလာ။ – SoShwe
Home/Tech/Apple ရဲ့ 5G iPhone အသဈနဲ့ပတျသကျသညျ့ ကောလာဟလထှကျရှိလာ။
Apple ရဲ့ 5G iPhone အသဈနဲ့ပတျသကျသညျ့ ကောလာဟလထှကျရှိလာ။
So Shwe February 18, 2020	Tech Leaveacomment
ယခု (၂၀၂၀) ခုနှဈအတှငျး၌ ထှကျပျေါလာနိုငျသညျ့ Apple ရဲ့ 5G iPhone ၌ ကိုယျပိုငျအငျတာနာ ပါဝငျလာနိုငျကွောငျး သတငျးမြားထှကျပျေါနပေါတယျ။ သို့ရာတှငျမူ Apple အနဖွေငျ့ နာမညျကွီး Qualcomm ကုမ်ပဏီရဲ့ အငျတငျနာအစိတျအပိုငျးမြားကို သူတို့လိုအပျသညျ့ အခကျြအလကျမြားနဲ့ မကိုကျညီခွငျးကွောငျ့ အသုံးပွုသှားမညျမဟုတျကွောငျးလညျး သတငျးမြားက ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
ယခုနှဈအတှငျး၌ Apple ရဲ့ အဓိကပွိုငျဘကျကုမ်ပဏီဖွဈသညျ့ Samsung က Galaxy S20 ကို စတငျမိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးဖွဈသလို အခွားသောကုမ်ပဏီမြားကလညျး နှဈသဈအတှကျ သူတို့ရဲ့ထုတျကုနျအသဈမြားကို မိတျဆကျပေးခဲ့ကွပွီးဖွဈပမေယျ့ Apple ကမူ လကျရှိအခြိနျအထိ သူတို့ရဲ့ ပရိသတျမြားအတှကျ ကုနျပစ်စညျးအသဈကို မိတျဆကျပေးနိုငျခွငျးမရှိသေးပေ။ Apple ကုမ်ပဏီရဲ့ လလေ့ာဆနျးစဈသူတဈဦးဖွဈသညျ့ Ming Chi Kuo က Apple အနဖွေငျ့ ယခုနှဈအတှငျး၌ 5G ဖုနျးအမြိုးအစား (၃) မြိုးအထိ ထုတျလုပျနိုငျကွောငျး ခနျ့မှနျးထားပမေယျ့ Apple ဘကျကမူ အဆိုပါပွောစကားကို တဈစုံတဈရာတုံ့ပွနျခဲ့ခွငျးမရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
Apple ကုမ်ပဏီအနဖွေငျ့ ယခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလအတှငျး၌ iPhone 12၊ 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max တို့ကို မိတျဆကျပေးသှားဖှယျရှိကွောငျးလညျး ကောလာဟလမြားထှကျပျေါနပေါတယျ။ Apple နဲ့ နာမညျကွီး Qualcomm တို့အကွား အရှုပျအထှေးမြားလညျးရှိခဲ့ဖူးပွီး (၂၀၁၁) ခုနှဈမှ စတငျလကျတှဲခဲ့သညျ့ အဆိုပါကုမ်ပဏီနှဈခုသညျ Qualcomm ရဲ့ လိုငျစငျမူပိုငျခှငျ့နဲ့ပတျသကျ၍လညျး အငွငျးပှားမှုမြားရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။
တရားရုံးအထိတကျပွီး အဆုံးအဖွတျခံယူခဲ့ရသညျ့ အဆိုပါကုမ်ပဏီနှဈခုသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈ၊ ဧပွီလ၌ ကာလရှညျစာခြုပျပွနျလညျခြုပျဆိုဖွဈခဲ့ကွပွီး iPhone ရဲ့ 5G Chip မြားကို Qualcomm ကုမ်ပဏီမှ ပွနျလညျထောကျပံ့ပေးသှားတော့မညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
Apple ရဲ့ 5G iPhone အသစ်နဲ့ပတ်သက်သည့် ကောလာဟလထွက်ရှိလာ။
ယခု (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွင်း၌ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် Apple ရဲ့ 5G iPhone ၌ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနာ ပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သို့ရာတွင်မူ Apple အနေဖြင့် နာမည်ကြီး Qualcomm ကုမ္ပဏီရဲ့ အင်တင်နာအစိတ်အပိုင်းများကို သူတို့လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနဲ့ မကိုက်ညီခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွင်း၌ Apple ရဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Samsung က Galaxy S20 ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သလို အခြားသောကုမ္ပဏီများကလည်း နှစ်သစ်အတွက် သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပေမယ့် Apple ကမူ လက်ရှိအချိန်အထိ သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Ming Chi Kuo က Apple အနေဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း၌ 5G ဖုန်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးအထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပေမယ့် Apple ဘက်ကမူ အဆိုပါပြောစကားကို တစ်စုံတစ်ရာတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Apple ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ iPhone 12၊ 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း ကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Apple နဲ့ နာမည်ကြီး Qualcomm တို့အကြား အရှုပ်အထွေးများလည်းရှိခဲ့ဖူးပြီး (၂၀၁၁) ခုနှစ်မှ စတင်လက်တွဲခဲ့သည့် အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် Qualcomm ရဲ့ လိုင်စင်မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်၍လည်း အငြင်းပွားမှုများရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
တရားရုံးအထိတက်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ခံယူခဲ့ရသည့် အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၌ ကာလရှည်စာချုပ်ပြန်လည်ချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ကြပြီး iPhone ရဲ့ 5G Chip များကို Qualcomm ကုမ္ပဏီမှ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ?????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????? ? ?????
Next ?????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????